Binance Akachengeteka here? Yakagadziriswa 30% yeSpot Cryptocurrency Vhoriyamu yaKurume 2022 - Cazoo
musha » musha » Binance Akachengeteka here? Yakakwanisa 30% yenzvimbo vhoriyamu yecryptocurrencies yaKurume 2022
CryptoCompare's ichangoburwa mwedzi mushumo inoratidza Binance akatapa chinenge chikamu chimwe muzvitatu chemari yese yakatengeswa pamapuratifomu ekriptoaktifomu muna Kurume 2022. Hapana mabhanana.
Maererano ichangoburwa mushumo kubva CryptoCompare, ari crypto musika muongorori, zvachose gwapa musika yakakura 10,5% muna March, pamwe zvokutengeserana mavhoriyamu kusvika $ 1,6 tiririyoni… TRILLION. KWETE MABHANA. 69,9% yehuwandu hwehuwandu hwakaunganidzwa ne15 ye crypto exchanges yakakura munyika yose, kusanganisira Binance, Coinbase, Bitfinex, OKX, Huobi, FTX uye Kraken.
Binance inotonga nzvimbo cryptocurrency musika
Binance, yemwedzi waKurume 2022, yakaverengera 30,2% yehuwandu hwekutengesa kwemusika wenzvimbo, ichiita madhora mazana mana nemakumi mapfumbamwe emadhora mukati. Iko kuwedzera kwe490% pamusoro pemavhoriyamu aFebruary.
Kunyange zvazvo nhamba iyi iri pazasi zvishoma rekodhi rekodhi musika chikamu che33,7% muna Mbudzi 2021, ibudiriro huru yeBinance.
Binance inoteverwa neCoinbase uye OKX ine nzvimbo yemusika migove ye5% uye 4,7% zvichiteerana. Coinbase yakagadziridzwa $ 81,9 bhiriyoni mumadhiri epasi, pasi 12% pamwedzi, uye OKX yakagadziridzwa $ 75,9 bhiriyoni, pasi ne26%.
Exchange Ongororo Kurume 2022 ye CryptoCompare saiti
Mambo we crypto derivatives
Chiitiko mumusika wezvinobvamo chakawedzera mushure memwedzi mitanhatu yakateedzana yekudzikira, nemavhoriyamu achikwira zvakanyanya munaKurume. Uyewo maererano CryptoCompare mushumo, derivatives zvokutengeserana vhoriyamu yakawedzera 4,58% kusvika $ 2,74 tiririyoni, achiverengera 62,8% ose centralized zvokutengeserana vhoriyamu, nepo gwapa zvokutengeserana vhoriyamu akaverengera asara 37,2%.
CoinCompare akacherechedza kuti derivatives musika ane yepamusoro zvokutengeserana mavhoriyamu kupfuura gwapa, sezvo vatengesi vanongwarira pamusoro ngozi chokuita gwapa zvokutengeserana.
Crypto derivatives zvibvumirano zvechipiri izvo zvinotevedzera mutengo weiyo yakadzika asset. Vazhinji vanoisa mari vanosarudza kupinda muzvibvumirano zvekubva kune izvo zvinovabvumidza kusiyanisa kuratidzwa kwavo kune akasiyana cryptocurrencies uye kuvadzivirira kubva kune yakanyanyisa kushanduka kwemutengo.
Sekureva kwemushumo, Binance yakava iyo yakakura kwazvo kubva kune yakatsinhana munaKurume 2022, ichitungamira musika neinenge 52% yezvese zvakatorwa zvakatengeswa. Kutsinhana kwakagadzirisa mari inodarika madhora miriyoni 1,4 mumatanho ekutorwa munaKurume, yakakwira 8,3% kubva pavhoriyamu yaFebruary.
Inoteverwa neOKX ine huwandu hwemadhora 446 bhiriyoni (+ 12,5%), Bybit nemadhora mazana matatu nemakumi masere (pasi 380%) uye FTX nemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu emadhora (+ 8,8%).
Binance Akachengeteka here?
Binance inoratidzawo nehuwandu hwekutengeserana iyo inogadzirisa iyo yakasimba uye yakavimbika kuchinjana, inoshandiswa nevakawanda cryptoinvestors.
Nyika ye cryptocurrencies inotyisa, nenzira kwayo, vese avo vanofunga kuisa mari, uye vanoda kuzviita nenzira yakachengeteka. Kuisa mari yako kune yekutsinhana kwakafanana nekudyara mari mubhangi: unoteerera kune izvo institution inopa uye sarudza kuvimba nehunyanzvi hwavo kuti mari isarasikirwe. Tine tarisiro, simba ravo nderekuti havazokundikane, kuti havakuputsi, kuti vacharamba vachishanduka nekuvandudza.
Ndakanyora chinyorwa chakareba kutsanangura kuti Binance ndiani: Gwara rakazara rekunzwisisa mashandisiro eBinance. Pane mapoinzi ekufarira uye anopokana .. asi masimba avo, kukura kunogara kwevashandisi vayo uye nekutenda kuhukama uhwu huwandu hukuru hwekutengesa zvese zvezvinobva uye zvemusika musika unoratidza kusimba kwayo. Muvambi waro Changpeng Zhao, ngatisakanganwe, akatoonekwa pabutiro remagazini yeForbes.
Iwe unyoresa Binance mahara, uye iwe unogona kuzviita kubva pane iyi link kuwana 20% kuderedzwa pamakomisheni, zvachose. Kana kuti tinya bhatani riri pazasi.
SHANDISA BINANCE NE20% Discount
Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve izvo zvidzoreso zvekomisheni, unogona kuzviita nekuverenga chinyorwa ichi kuderedzwa pamari yeBinance, kana nekuongorora kuti chii chinonzi Binance's BNB token, nzira huru yekubhadhara makomisheni paBinance, nekuverenga nyaya ino yakatsaurirwa Binance Coin (BNB).
Nyaya yapfuuraIwo metrics ekufunga nezvekutenga nekutengesa maNFTs